Ya mere, ruo izu 2 anaghị m enwe nzukọ ọ bụla. Ndị mere ga-asị na m bụ n'ebe ahụ, ụfọdụ ngalaba-ọrụ ga-egwuregwu ma ọ bụ were iwe banyere ya… ma n'ikpeazụ, m onyeisi n'oge na-adịghị eche. Ọ chọghị ịma n'ihi na m arụpụtaghị nke ukwuu. Nsogbu bụ na nzukọ nọ na-akpọnwụ nzukọ organization ma kpọnwụrụ m. N'ihi gịnị? N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe - ọ dịghị mgbe a gụrụ ndị mmadụ akwụkwọ banyere mgbe ha ga-eme nzukọ ma ọ bụ otu ha ga-esi nwee nzukọ na-arụpụta ihe. O di nwute, obughi ihe ha na akuziri na mahadum.
Enwere m edere banyere nzukọ ezi a bit… ha a Pita peeve nke m. Ọbụna m mere ngosi na nzukọ bụ maka ọnwụ nke arụpụtaghị America. O bukwa ihe ozo mere m ji hu a Nsonaazụ Naanị Ọnọdụ Ọrụ. Ọ bụrụ na nzukọ ezighi ezi ma hazie ya, ha ga-egbusi oge niile. Ọ bụrụ na ị nwere mmadụ ise n’ime ụlọ n’ụlọ ọrụ, o nwere ike bụrụ na nzukọ gị na-efu $ 5 otu elekere. You ga-enwe ọtụtụ ma ọ bụrụ na i chere banyere ya otu ahụ?